AFENO NY COLLAGEIT AMIN'NY TENY ROSIANA - PROGRAMME REVIEW - 2019
Mazava ho azy, te-hanana mpiserasera mahafinaritra ho an'ny fifandraisana amin'ny Skype avokoa ny mpampiasa rehetra, izay hofidiany ho an'ny tenany. Raha ny marina, amin'ny alalan'ny fampiasa ny mpampiasa dia tsy miditra ao amin'ny kaontinao fotsiny, fa amin'ny alalàn'ny mpampiasa dia hifanerasera aminy ny mpampiasa hafa. Andao hianatra ny fomba hananganana solonanarana ao Skype.
Ny nuance amin'ny famoronana ny fidirana aloha sy ankehitriny
Raha teo aloha, izay anarana manokana dia azo ampiasaina ho toy ny fisoratana anarana amin'ny literatiora latinina, izany hoe anarana iray noforonin'ny mpampiasa iray (ohatra, ivan07051970), avy eo rehefa nividy Skype i Microsoft, dia ny adiresy no adiresy email an'ny mpampiasa, na ao amin'ny kaonty Microsoft. Mazava ho azy, maro ireo olona mitsikera an'i Microsoft noho io fanapahan-kevitra io, satria mora kokoa ny maneho ny maha-izy azy amin'ny anarana manokana sy mahaliana raha oharina amin'ny adiresy mailaka na nomeraon-telefaona.
Na dia, amin'izao fotoana izao, dia misy ihany koa ny fahafahana mahita mpampiasa amin'ny angon-drakitra izay nomeny anarana sy anarana voalohany, fa mba hampidirana ao amin'ny kaonty, tsy toy ny fampidirana, ity angona ity dia tsy azo ampiasaina. Amin'ny ankapobeny, ny anarana voalohany sy farany dia manatanteraka ny asan'ny anaram-bosotra. Noho izany, nisy ny fisarahana ny fisintonana, ka ny mpampiasa dia miditra ao amin'ny kaontinao, ary ny anaram-bosotra (anarana voalohany sy ny anarany).
Na dia izany aza, ireo mpampiasa izay nanoratra ny anaran'ny mpampiasa azy alohan'ny fanavaozana dia ampiasao azy ireo toy ny teo aloha, fa rehefa manoratra kaonty vaovao dia tsy maintsy mampiasa mailaka na nomeraon-telefaona.
Fandraisana ny famoronana Algorithm
Andeha hojerentsika akaiky ny fizotran'ny fanoratana izao.
Ny fomba tsotra indrindra dia ny fisoratana anarana fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny Skype interface. Raha toa ianao ka miditra amin'ny Skype voalohany indrindra amin'ity solosaina ity, dia apetraho fotsiny ny fampiharana, fa raha efa manana kaonty ianao, dia tsy maintsy miala avy ao amin'ny kaontinao avy hatrany. Raha manao izany ianao, tsindrio ny fizarana "Skype" ary sokafanao ny singa "Exit from account".
Voarakitra ny varavarankely ary manokatra varavarankely eo anoloanay. Saingy, satria mila manoratra fisoratana anarana vaovao isika, dia tsindrio amin'ny teny hoe "Mamorona kaonty".
Araka ny hitanao, soso-kevitra voalohany amin'ny fampiasana nomeraon-telefaona ho fampidirana. Raha irinao, azonao atao ny mifidy boaty mailaka, izay horesahina bebe kokoa. Noho izany, miditra ao amin'ny code of our country (ho an'i Rosia + 7), ary ny laharan'ny finday. Zava-dehibe ny miditra ireo angona azo antoka, raha tsy izany dia tsy ho afaka hanamafy ny fahamarinany amin'ny SMS ianao, ary noho izany dia tsy afaka ny hisoratra anarana ianao.
Ao amin'ny saha ambany indrindra, midira ny tenimiafina tsy azo antoka fa azo antoka, izay ahafahantsika miditra ny kaontintsika amin'ny ho avy. Tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, tanisao ny tena anarana sy ny anarany, na anaram-bosotra. Tsy ilaina izany. Tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Ary noho izany, ny SMS misy code dia tonga amin'ny nomeraon-telefaoninao, izay tsy maintsy miditra ao amin'ny varavarankely vaovao. Midira ary tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Ny zava-drehetra, fanalahidy dia noforonina. Ity no nomeraon-telefaoninao. Ampidiro ao amin'ny kaontinao ny tenimiafina sy ny tenimiafina ao amin'ny taratasy fangatahana mety.
Raha te hampiasa ny mailaka ianao ho toy ny logiciel, dia ao amin'ny pejy izay angatahanao miditra amin'ny laharan'ny findainao, ianao dia mila miditra amin'ny lohateny hoe "Ampiasao ny adiresy imailaka misy anao".
Ao amin'ny varavarankely misokatra, miditra ny adiresy imailakao marina sy ny tenimiafinao. Avy eo, mila tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Tahaka ny fotoana farany, midira ao amin'ny varavarankely vaovao ny anarana sy ny anarany. Mandehana any amin'ny bokotra "Manaraka".
Ao amin'ny varavarankely manaraka ianao dia mila miditra ao amin'ny codec activation izay tonga amin'ny mailakao. Midira ary tsindrio ny bokotra "Manaraka".
Voasoratra ny fanoratana, ary ny e-mail dia manatanteraka ny fanovana.
Azonao atao koa ny manoratra ao amin'ny tranonkala Skype amin'ny fidirana amin'ny alalan'ny navigateur. Ny fepetra fisoratana anarana dia mitovy tanteraka amin'ny zavatra vita amin'ny alalan'ny interface programa.
Araka ny hitantsika, raha jerena ny fanavaozana dia tsy azo atao ny misoratra anarana eo ambanin'ny fanovàna amin'ny endrika tahaka ny teo aloha. Na dia mbola misy foana aza ny logins, dia tsy ilaina ny manoratra izany ao amin'ny kaonty vaovao. Raha ny marina dia nanomboka nanao adiresy mailaka sy nomeraon-telefaona ny asan'ny logins amin'ny Skype nandritra ny fisoratana anarana.